musha > Travel Europe > 5 Best European Capitals To Travel By Train
The nguva pakupedzisira yasvika – kana iwe waita chete kudzidza payunivhesiti, vari kuenda kunze kwenyu zororo wegore, kana vakasarudza kuti kwezva munyika kufamba hazvigoni uchashayikwa, zvawasarudza kuenda Europe nechitima. Chinhu kudanana pfungwa, mumwe kudii vakafamba nezviuru mumakore. Zvingavawo vachikurirwa zvakakwana. Europe inozivikanwa kwazvo njanji kwokubatana. Kubva chipa omunharaunda matikiti kuti kondinendi-zvakatevedzana EU njanji zvichipfuura, zviri nyore kusvetukira imwe overnighter uye anosvika kwauri kuenda mangwana, vakagadzirira yenyu Newest ushingi.
Asi unofanira kuenda kupi? Kana nguva kana yako zvegumi zvenyu yokutanga, kungoitira Vhoriyamu nezvitima iripo kungaita kushushikana, kuvhiringidzika uye zvachose kutya kurasikirwa. vanonetseka kwete – nekuti isu tanga vakaungana pano bhakiti mazita 5 yakanakisisa misorowo European kuenda nechitima. Gara pasi, bhande epazvigaro, uye kunze nzvimbo yakanakisisa baguettes romuFrance, nekuti tiri kuenda chokufambisa.
1. Best European Capitals To Travel By Train: Paris, Furanzi
sezvakapikirwa, tiri kutanga rwendo urwu zvachose, aine vanorega mune rimwe remaguta munyika dzakawanda rakakurumbira uye famously uchidanana. Paris ane zvimwe yakanakisisa njanji kwokubatana kumativi, pamwe nezvitima vaimhanya yose peguta, saka haumbonyatsovi kure yemapurisa. Paris izere nezvinhu kuita, saka iwe unenge uchida kugara pano kwemazuva dzinenge nhatu kuti kwatakaita upenyu guta.
Regai nokuda Louvre nekuti Peek panguva Mona Lisa kana kushandisa glutes avo kubudikidza achikwidza Arc De Triomphe. Nakidzwa chisvusvuro rwendo pamusoro Rhine, kubhadhara kushanya kune dzimwe French boutiques, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
Ehe saizvozvo, Paris kunopfuura guta rayo centre. The vaizvambarara guru musha vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri, izvo zvinoreva unogona kupedza mavhiki pano pasina scratching pemvura chii chinofanira kupfupiro zvechokwadi. Getaway kuti zuva rwendo kubva vazhinji panguva Pont Alexandre III uye musoro Versailles, apo Royal Palace achiri anotonga mukuru pasinei kwayo nzvimbo kubvira muma1700. Day matikiti inongova € 20 uye anosanganisira mukova kuna Palace, ari Gardens uye zvakawanda. Even nani, nezvitima vanomhanya kubva peguta zvakananga Palace, izvo kunoita kuwana ikoko mhepo. interconnectedness ichi pamutemo zvinoita Paris mumwe wedu yemisoro yakanakisisa European kuti chitima nzendo.
Mumwe wangu pachake chandinodisisa maguta uye zvadzo maawa maviri kubva Paris riri guta guru United Kingdom: London. Izvi utsotso muhari Mutsika iri musha ane whopping vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kuti kubva zvose inofamba upenyu. Kubva POSH Chelsea kune simba Sohõ, uchawana zvinhu nokuti munhu wose ari bato rako. Hove imwe achangobuda musicals vasati vakananga pamusoro Shakespeare raMwari Globe uye kupedza usiku chako Shard, chirefu kupfuura shongwe muLondon.
Iwe haazodi kukurumidza kuburikidza guta rino, saka vanoronga nguva yako maererano. Ungave uri vakananga kuna Harry Potter Studios (awa kubva muguta centre), kana kungogeza ari makuru varipo akafanana Shongwe London, St. Pauro Cathedral, Westminster Abbey, Big Ben, kana London Eye, miniti ose apedza muLondon ndiyo mukana wokudzidza zvakawanda pamusoro nyika ane Empire kamwe raakazoita nyika.
The Eurostar mukuru-nokukurumidza chitima anotora iwe kubva Paris kuLondon muzinda pemaawa maviri, izvo zvinoreva uchaita vasapedza nguva rokufambira uye yakawanda nguva adventuring. saka, isu funga London kuti imwe yakanaka yemisoro European kuti kufamba nechitima.
3. Best European Capitals To Travel By Train: Amsterdam, Netharenzi
Inozivikanwa migero ayo uye nebhasikoro-muyanzvi yevagari, Amsterdam anopenya sezvo Netherland kuti guta. With rakasiyana chakagadzirwa, Amsterdam chinhu chose achitapira guta uye standout pakati European misoro. Zvitima kubva Paris yakareba maawa matatu uye aiise iwe pa Amsterdam Centraal, riri mumwoyo peguta.
Head kuti Museumplein kutora muna Van Gogh miziyamu asati vaienda Mumba Bols Cocktail & Genever Experience, izvo zvinosanganisira dzaunosarudza coctail mune anoravira mukamuri raro.
Musakanganwa kuti rwendo ari migero, kana. Ungave tora akazvitsaurira runobudirira kana hop pana rimwe guta racho pachena magwa, uchafarirwa. wose itsva maonero kubva mumvura. Pasinei propensity raro kuti zvikepe bikes, Amsterdam nyore kubva zvose pamusoro Europe vachishandisa kumusoro-nokukurumidza njanji, kuita izvi chimwe pamusoro kurwa kuti yakanakisisa European guta nokuda chitima kufamba.
4. Berlin, Jerimani
A testamende kune German unyanzvi, guta Berlin chinonakidza chidzidzo yokubatana. Napakati pedyo Wall Berlin, guta rino chete atangazve kubatana kwayo 1989 vachitevera pokuwa utongi hwechiKomonisiti kumabvazuva. kubvira ipapo, izvozvo waimera mumadhorobha kukura uye zvino kumba vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kusvika. Ndizvo azere ndege doro nembariro, mamiziyamu, uye graffitied zvakasara Wall.
Sezvo nzvimbo mutsika munyika, Berlin kunokosha-kushanya. Ungave uri kutsvaka yakanatswa varaidzo muchimiro ane dhanzi kana kutsvaka kuti varove dzimwe hippest mupfungwa mu Europe, Berlin haana kuti uchashayikwa.
Kunyange izvozvo mukatora imi maawa dzinenge nhanhatu kuti pano kubva Amsterdam, pane akawanda nezvitima pazuva, izvo zvinoreva unogona kuisa pachako purogiramu yako kusvika.
Akasiyana Western misoro European, Prague ndiro guru Czech Republic muna Eastern Europe uye kumwe maguta akakurumbira Central European. Home kune imwe zvikuru mumaraibhurari vakakurumbira munyika, ari Klementium, Prague showcases tsika yayo kumativi ose pakona. Vanoshanyira Astronomical Clock, mukuru uchishandisa wachi munyika. Tora remba yakapoteredza Old Town Square, apo cobblestone migwagwa uye pedestrianized Lanes zvinorevei unogona kupedza maawa mbeya pasina kunetseka.
Top kure nguva yako kumwa rimwe guta akawanda dura nembariro asati vakananga kunze kune mutambo mumhanzi.
Prague Anozvirumbidza wakanaka chitima Links nevamwe maguta, kusanganisira rwendo nguva kubva Berlin mana uye maawa nehafu. Kurega pano kufungisisa nhoroondo yeguta racho isati mberi rwendo rwenyu padzimba Vamwe Europe.
Europe ndiyo guru uye zvakasiyana-siyana nzvimbo ane Union zvinoreva ayo nyore pane kare kufamba nechitima. Shandisa borderless nyika kuenda misoro izvi kare pamusoro nguva yako. Tisangosiya nomusoro yendege uye ayo vazhinji uye overpriced ndege zvokudya uye kushandisa chitima kuenda parwendo. Ungave kusvetukira pepuranga rimwe remunharaunda nzira kana kupedza zvishoma zvokuwedzera vapamatunhu-nokukurumidza njanji, uchaita kunakidzwa njanji rwendo, kuti nzvimbo dzinoyevedza uye mujenya rose kupfuura.
Tine iwe akafukidza zvedu mazano okufambisa. Zvino nguva bhuku imwe chitima matikiti! Save A Train ndiyo nzvimbo kuzotenga chitima matikiti.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best European Capitals To Travel By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti / of kana / kes uye mimwe mitauro.
guta capitals europeantravel europetrains eurotrip London Train Travel travelfrance travelgermany travelnetherlands
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe